Markaad maqasho magaca “Caydiid” waxaa markaba maskaxdaada kusoo dhacaya Jeneraal Maxamed Faarax Caydiid, gudoomiyihii geeriyooday ee ururka USC/SNA. Balse qoraalkanu waa mid lagaga hadlayo wiil uu dhalay jeneraalku.
Xuseen Maxamed Faarax Caydiid waa 39 sano jir ku barbaaray gobolka California ee cariga Mareykanka. Wuxuu ku biiray kana tirsanaa ciidanka Mareykanka qeybta loo yaqaan Marineska. Xuseen wuxuu kamid ahaa ciidamadii Mareykanka ee soo galay Soomaaliya sanadkii 1992 si ay wax uga qabtaan gaajadii ba'neyd ee ka jirtay gobolada Bay iyo Bakool iyo guud ahaan Soomaaliya.
Xuseen wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho bishii August 1995 si uu uga qeyb qaato dowlad aabihiis kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho bishii April sanadkii 1995, dowladaasoo la magac baxday “Salbalaar”. Ku baaqidii dowladaas ayaa sababay khilaaf weyn oo kala dhex galay Jeneraal Caydiid iyo Cusmaan Caato oo ka mid ahaa hogaanka ururka USC/SNA, khilaafkaasoo keenay in ururku laba garab u kala jabo, dagaalana ay dhex maraan.
Geeridii Jeneraal Caydiid kadib, hogaanka ururka USC/SNA ayaa shaaca ka qaaday in Xuseen Caydiid loo doortay jagada Madaxweynaha dowlada “Salbalaar” iyo gudoomiyaha USC/SNA. Waxaa jiray rag badan oo ku haboonaa qabashada jagooyinkaas uu baneeyey Jeneraal Caydiid waxaana ragaas kamida ah xoghayaha guud ee ururka USC/SNA Cabdikariim Axmed Cali iyo gudoomiyaha gudiga fulinta ee ururka Prof. Ciise Maxamed Siyaad.
Frank Crigler oo ahaa safiirkii hore ee Mareykanka u fadhin jirey Soomaaliya ayaa sida laweriyey waxaa lacag usoo bandhigay Xuseen Caydiid si uu olole uga bilaabo Washington, ololahaasoo uu aqoonsi ugu raadinayo dowladii “Salbalaar”. Balse dadaalkaasoo idil wuxuu noqday “hal bacaad lagu lisay” sababtoo ah Mareykanku wax cabsi ah kama aaney qabin awood ururka Al-itixaad Soomaaliya ku yeesho, sidoo kale maamulkii Calinton maba aanu dooneyn inuu malo magaca “Soomaaliya” maadaama ay Soomaaliya aheyd jab siyaasadeed ee soo gaara Clinton kii ugu weynaa.
Maadaama uusan wax aqoon ah u laheyn siyaasada Soomaaliya, isha keliya ee uu wax ka maqli jirey waxey aheyd aabihiis, geeridii Jeneraalka kadibna waxaa hagi jirey la taliyeyaashii aabihiis, iminkana waxaa muuqata in qofka keliya ee haga uu yahay ra'iisul wasaaraha Xabashida Melez Zenawi.
Xuseen oo iminka u muuqda mid go'doon ka ah ururka uu hogaamiyo ee USC/SNA ayaa ku sugan magaalada Adis Ababa ee cariga itoobiya, halkaasoo uu xarun ka dhigtay, kana talo iyo tusaale qaato melez Zenawi. Xuseen ayaa u sheegay weriyeyaal reer Galbeed ah inaanu ku noolaan Karin Muqdisho kadib markuu ka baxsaday isku day dil in ka badan sadex jeer.
Xuseen oo dhowaan u waramay saxaafada caalamka isagoo jooga magaalada Adis Ababa ayaa sheegay inuu yahay muwaadin Mareykan ah, garanayana halka ay ku jirto danta Mareykanku. Wuxuu sheegay inuu aad uga xun yahay dhibaatooyinkii ka dhacay New York iyo Washington “Shacabka Mareykanka dhib weyn ayaa kasoo gaaray weeraradii argagixiso mana aqbaleyno inuu dhib kale gaaro” ayuu yiri Xuseen Caydiid oo wareysi siiyey weriye ka socday Telefishinka FOXNEWS. “Mareykanku waa inuu duqeeyaa Soomaaliya si aad u daran deg degna ah” ayuu raaciyey hadalkiisa. Xuseen Caydiid waa nin ka xun dhibka gaaray Mareykanka isla markaana dalbaya dhib gaara shacabka Soomaaliyeed. Weli lama maqal Xuseen caydiid oo ka hadlaya dhibaatooyinka haysta umada Soomaaliyeed. Mar walba oo uu soo hadal qaado wuxuu sheegaa iney lagama maarmaan tahay weerar mareykanku kusoo qaado shacabka Soomaaliyeed.
The Habar Gidir clan
AFEEF: Aragtida qoraalkaan waa mid ugaara qoraaga kusaxiian, kana tarjumi maayo aragtida Qandala Home